Dowlada Itoobiya oo Go’aan adag ka qaadatay Sigaarka iyo Khamriga – WIDHWIDH ONLINE
Dowlada Itoobiya oo Go’aan adag ka qaadatay Sigaarka iyo Khamriga
Published: February 6, 20192:03 pm
Dowlada Itoobiya ayaa go’aan ka qaadatay sigaarka lagu dhax cabo goobaha ay bulshada isugu timaado iyo sidoo kale Khamriga laga xayeesiiyo Warbaahinada kala duwan ee dalkaasi ka jira.
Aqalka wakiilada dalka Itoobiya ayaa kulan xasaasi ah ay yeesheen waxa ay ku meel mariyeen in sigaarka aan lagu dhax cabi karin goobaha dadweynaha isugu yimaadaan sida Isbitaalada oo kale.
Sharciga cusub ay meel mariyeen Aqalka Wakiilada dowlada Itoobiya ayaa mamnuucaya in sigaar lagu cabo meel u jirta 100 Mitir xarumaha caafimaadka, goobaha dadka ay isugu yimaadaan iyo goobaha shaqada.
Waxaa sidoo kale sharciga cusub ee laga meel mariyay dalka Itoobiya mamnuucayaa in Warbaahinta kala duwan ee dalkaasi laga xayeesiiyo qamriga iyo in sidoo kale laga iibiyo qamriga dad ka yar da’da 21-sano.
Isticmaalka Qamriga iyo sigaarka ayaa dhibaato badan ku haya dhalinta soo koreysa ee dalka Itoobiya, waxa ayna dowlada hada dooneysaa in gabi ahaan laga mamnuuco sigaarka in lagu dhax xabo goobaha bulshada isugu timaado.
War Deg Deg Ah: Golaha Wasiirada Koonfur Galbeed oo la magacaabay (Akhriso)
Published: February 2, 20199:13 am
Xildhibaan Dowladda Imaaraadka Uga Digay Inay Dhaqaale ku Bixiso Bur-burinta Dowladda Soomaaliya (DHAGAYSO)
Published: February 4, 20188:53 am